२०७५ मङ्सिर ७ शुक्रबार, एजेन्सी। नेशनल जियोग्राफिको फोटोग्राफर्सहरुले हरेक बर्ष लाखौ फोटो खिच्ने गर्दछन्।तर त्यस मध्ये सबै पब्लिश गरिदैन। यो काम धेरै ग्राह्रो हुन्छ। उनीहरु राम्रा फोटोग्राफर मात्र नभएर राम्ररी दोडन सक्ने पनि हुनुपर्दछ। ... बाँकी अंश»
हिटलरको कपडा लिलामीबाट लाखौं कमाउदैछ यो होटल
२०७५ मङ्सिर ६ बिहिबार, काठमाडौं । एडोल्फ हिटलर विश्वका सबैभन्द क्रूर तानाशाहमध्येका एक थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध यी तानाशाहको कारण भएको थियो । यी तानाशाह बितेको लामो समय भइसक्यो तर उनको चर्चा आज पनि सेलाएको छैन । उनको दुई अन्डरवेयर अमेरिकाले लिलामीका लागि राखेको छ । यी अन्डरवेयरको सुरुवाती मूल्य ५ हजार पाउण्ड तोकिएको छ । ... बाँकी अंश»
एक ट्रक सिक्का लिएर कार किन्न पुगे ग्राहक
२०७५ मङ्सिर ६ बिहिबार, काठमाडौं । सामान्य हिसाबमा भन्ने हो भने आवश्यक मूल्य छ भने त्यसमा नोट विवरण वा कति परिणाम छ भन्ने कुराको खासै महत्व हुँदैन तर धेरै ठुलो रकम सिक्कामा गन्नुपर्ने अवस्था आयो भने मानिसहरुलाई दिक्दारी हुन्छ । यस्तोमा लाखौं रुपैयाँको भुक्तानी सिक्कामा ल्याउँदाको अवस्था के होला ? चीनमा यस्तै किसिमको घटना घटेको छ । एक ग्राहक आफ्नो रोजाइको कारण किन्न ९ सय किलो सिक्का बोकेर गएका थिए । ... बाँकी अंश»
जनावरसँग जोडिएका कीर्तिमान
२०७५ मङ्सिर ६ बिहिबार, काठमाडौं । कीर्तिमान मानिसले मात्र बनाउदैनन् जनावरले पनि बनाउछन् । आज, हामी तपाईंलाई यस्तो रेकर्डको बारेमा बताउँदैछौ जुन हरेक जनावरको विशेषताहरू मात्र होइनन्, आफैमा रेकर्ड हुन् । ... बाँकी अंश»
संसारको कल्पना भन्दा बाहिरका वास्तविक स्थान
२०७५ मङ्सिर ६ बिहिबार, काठमाडौं । संसारमा यस्ता पनि ठाँउहरु छन् जसलाई देख्दा तपाईलाई काल्पनिक लाग्न सक्छ । तर वास्तविक हुन् । तपाई संसारका यी ठाँउका तस्बिर हेर्नुहोस । यी तस्बिर हेरेपछि तपाँईलाई स्वर्ग यसै धर्तीमा रहेको महसुस हुनेछ । यी चित्रहरू साँच्चै स्वर्गीय आवरणमा लिपिन्छन्, र काल्पनिक लग्नेछ। तपाईं यी तस्विरहरु मार्फत धेरै अद्भुत र सुन्दर ठाउँहरूको दृह्यपान गर्नुहुनेछ । ... बाँकी अंश»
यस्तो छ संसारको सबैभन्दा ठुलो कृत्रिम समुद्री तट
२०७५ मङ्सिर ५ बुधबार, एजेन्सी। 'कृत्रिम समुद्री तट' हरु हङ्गकङ्ग, बर्लिन र टोरन्टो सहित पुरै संसारमा प्रख्यात रहेका छन्। तर, जापानको मियाजाकीमा अवस्थित 'बीच' संसारकै सबै भन्दा ठूलो 'कृत्रिम समुद्री तट' हो। ... बाँकी अंश»
विश्वका सबैभन्दा धनी मुलुकहरु
२०७५ मङ्सिर ५ बुधबार, काठमाडौं । कुनै पनि मुलुकको आफ्नै किसिमको विशेषता हुन्छ । फरक–फरक विशेषता भएका मुलुकहरुलाई फरक फरक सूचीमा राख्न सकिन्छ । ... बाँकी अंश»
कस्ता छन् संसारका सबैभन्दा ठूला हिरा
२०७५ मङ्सिर ५ बुधबार, काठमाडौं । सुन्दर आभूषलाई नचाहाने को होला ? त्यसमा पनि हिरा भए अझ आकर्षक । हिरा चिजै त्यस्तो हो जहाँ सजिन्छ त्यहाँ को शान अझ बढ्छ । तर हिरा पाउन त्यति सजिलो छैन । केही हिरा यस्ता छन् जसलाई पाउन राजा-महाराजा पनि चाहान्छन् । ... बाँकी अंश»
यस्तो रेलवे स्टेशन जहाँ स्वदेशीलाई पनि चाहिन्छ पासपोर्ट र भिसा
२०७५ मङ्सिर ४ मंगलबार, काठमाडौं । भारतमा एक रेलवे स्टेशन रहेको छ जहाँ भारतीयलाई पनि भिसा अनिवार्य छ। एयरकन्डीशनर युक्त सो अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशनको नाम अटारी हो । यहाँ पुग्नको लागि पाकिस्तानी भिसा अनिवार्य गरिएको छ । खुफिया र सुरक्षा एजेन्सिहरुले २४ सौ घण्टा घेरेको सो रेलवे स्टेशनमा बिना भिजा पुग्ने नागरिकलाई १४ फोरेन एक्ट (बिना भिजा रेलवे स्टेशनमा आएको आरोप) मा मुद्दा दर्ता गरिने गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
चिम्पाञ्जीबाट नेताहरुले सिक्नुपर्ने पाँच कुरा
२०७५ मङ्सिर ४ मंगलबार, काठमाडौं । राजनीतिको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले मानिसको छविको कुरा आउनु स्वाभाविक हो । यस्तोमा राजनीति गर्ने मानिसहरुका लागि चिम्पाञ्जीबाट निम्न कुराहरु सिक्नु जरुरी हुन्छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर ३ सोमबार, काठमाडौं । विश्वमा लुटपाटको घटना दिनहुँ हुने गर्छन् । तर केही घटनाहरू भने सबैलाई चकित पार्ने र समाचारको शिर्षमा छाउने गरेका छन् । हामी यस्तै केही ठुला चोरीको बिषयमा यहाँ चर्चा गर्दैछौ । यी चोरीले करोडौ-अर्बौ रुपैयाँहरु हराए जुन रकमले केहि देशका कुल गृहस्थ उत्पादन (जीडीपी) चल्न सक्थ्यो । ... बाँकी अंश»
संसारकै छोटो विवाह, १५ मिनेट भित्रै सम्बन्ध विच्छेद !
२०७५ मङ्सिर ३ सोमबार, काठमाडौं । भनिन्छ विवाह सात जन्मको पवित्र बन्धन हो । तर यो भनाइ प्रत्येक ठाँउ र सबैमा लागु हुनै पर्छ भन्ने छैन। केहि मानिसको विवाह धेरै दिन सम्म नटिक्न पनि सक्छ । पछिल्लो समय दुबईका एक जोडि यहि बिषयको चर्चामा रहेका छन् । दुबईका यी जोडिको विवाह सम्बन्ध १५ मिनेटसम्म मात्र टिकेको थियो । यो संसारकै सबैभन्दा छोटो विवाह सम्बन्ध रहेको केहि मानिसहरुले दावि गरेका छन् । विवाहको १५ मिनेटपछि सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो । ... बाँकी अंश»
कम्पनीले पठायो एउटा केराको लागि कार किन्न सकिने मूल्यको बिल
२०७५ मङ्सिर ३ सोमबार, काठमाडौं । एउटा केराको मूल्य कति पर्ला १०–१५ रुपैयाँ बढीमा २० रुपैयाँसम्म पर्ने गर्छ । यति मूल्यमा एउटा कार खरिद गर्न सकिएला ? यो कल्पना गर्न नसकिने कुरा हो तर एक व्यक्तिले एउटा केराको बिल कार खरिद गर्न सकिने रकमबराबरका पाएका छन् । ... बाँकी अंश»
फाँसी दिनु अघि दोषीको कानमा के सुनाइन्छ ? रोचक तथ्य
२०७५ मङ्सिर ३ सोमबार, काठमाडौं । विश्वका धेरै मुलुकहरुमा मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ । जसमध्ये भारत पनि एक हो । भारतमा पनि फाँसीको विषयमा विभिन्न चलचित्रमा पनि देखाइने गरिएको छ । यद्यपि फिल्ममा देखाइने फाँसीको दृश्य वास्तविक जीवनको भन्दा फरक हुने गरेको छ । जो कोहीलाई पनि त्यतिकै फाँसीको कठघरामा उभ्याइन्न । जसमा फाँसी दिने अपराधहरु, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने समयलगायतका प्रक्रियाहरु सामेल हुन्छ । ... बाँकी अंश»
बाघलाई भालूले लखेटेपछि ...
२०७५ मङ्सिर २ आइतबार, काठमाडौं । बाघ बनको राजा ! भनिन्छ बाघ शिकारमा सधै जित्छ। तर केहि पटक यो शिकारीलाई पनि लडाइ गरेर भाग्नु पर्ने हुन्छ । यूट्यूबमा यस्तै एक भिडियो भाइरल भएको छ । भिडियोमा एउटा बाघ र भालूको बीच लडाइ देखाइएको छ । ... बाँकी अंश»
'डेटिङ' बारे विश्वका केही नियमहरु
२०७५ मङ्सिर २ आइतबार, काठमाडौं । जो कोही पनि आफ्नो विशेष साथीसँगको घुमाइ सम्झनलायक नै होस् भन्ने चाहन्छ । यस्तोमा उनीहरु यो भ्रमणलाई यादगार बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने गर्छन् । कुनै कुनै विषयहरुमा भने विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । यद्यपि डेटिङ जाने मामिलामा विश्वभर छुट्टैछुट्टै किसिमको प्रचलन रहेको छ । जसमध्येको केही यहाँ उल्लेख गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
यस्तो कम्पनी जहाँ कार्यालय सहयोगी नै छन् करोडपति
२०७५ मङ्सिर २ आइतबार, काठमाडौं । हुन त सबैलाई आफ्नो तलब कम नै लाग्छ । तर तपाईले भारतको एक कम्पनीको बारेमा सुन्नु भएको छैन होला । भारतको उक्त कम्पनीमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रमुखसम्म सबै करोडपति रहेका छन् । तपाईलाई जान्न मन होला कि त्‍यो कम्पनी कुन हो भनेर ? ... बाँकी अंश»
भारतीय रेलले तोड्यो ढिलाइको सबै रेकर्ड, साँढे तीन वर्षपछि पुग्यो सामान
२०७५ मङ्सिर २ आइतबार, काठमाडौं । भारतमा रेल ढिलो हुनु सामान्य समस्या हो । धेरैजसो स्थानमा तोकिएको समयमा रेल गन्तव्यमा नपुग्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । यस्तोमा अधिकारीहरुको काम सकेसम्म समयमा नै रेललाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने हुन्छ । ... बाँकी अंश»
महिलाको पेटमा ज्वेलरीको भण्डार !
२०७५ मङ्सिर १ शनिबार, काठमाडौं । संसारमा कयौ अनौठा घटनाहरु हुने गरेका छन् । तर त्‍यसमाथि तबसम्म हामी विश्वास गर्दैनौ जबसम्म हामी आफ्नै आँखाले प्रतक्ष देख्दैनौ । गुजरातको अहमदाबादमा यस्तै एक घटना भएको छ । त्यहाँकी एक महिलाको घटनाले सबैलाई चकित पारेको छ । ... बाँकी अंश»
आफैलाई सर्पले टोकाएर अनुभव लिएका वैज्ञानिकको कथा
२०७५ मङ्सिर १ शनिबार, काठमाडौं । के कुनै वैज्ञानिकले अध्ययनको लागि आफ्नो ज्यान दिन सक्छ ? इतिहास मा यसका कयौ उदाहरण रहेका छन् । यस मध्ये एक हुन् कार्ल पेटरसन शिमिट। सन् १९५७ को सेक्टेम्बरमा । अमरीकाको शिकागो प्रान्तको लिंकन पार्क चिडियाघरमा काम गर्ने एक व्यक्तिले एक अनौठो सर्प देखे । ... बाँकी अंश»